» प्रविण बेड्वालको नयाँ गीत ‘मुटुभित्र राख्छु तिमीलाई’ तयार
प्रविण बेड्वालको नयाँ गीत ‘मुटुभित्र राख्छु तिमीलाई’ तयार
२४ भाद्र २०७७, बुधबार २०:२८
मकवानपुर, २४ भदौ । नेपाल आईडल सिजन ३ का फस्र्ट रनर अप प्रविण बेड्वालको नयाँ गीत ‘मुटुभित्र राख्छु तिमीलाई’ तयार भएको छ । गीतकार दुर्गाप्रसाद कडरियाको शब्दमा रहेको यो गीत असोज पहिलो साता सार्वजनिक हुने बताइएको छ । गीतको टिजर पनि गीतकार कडरियाकै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
झापाली गीतकार कडरियाले आफ्नो आठौँ सांगितिक कोसेलीको रुपमा यो गीत बजारमा ल्याउन लागेका हुन् । प्रविणको आवाज तथा रमेश कडरियाको संगीतमा तयार भएको यो गीतको म्यूजिक भिडियो पनि छायाँकन भईसकेको छ । गीतको म्यूजिक भिडियोमा नवराज सिंह खड्का र प्रतिशा रिजालले अभिनय गरेका छन् । रिकेश बज्राचार्यले निर्देशन गरेको भिडियोलाई विकासले छायाँकन गरेका छन् । नेपाल आईडलबाट चर्चामा आएका प्रविणका अन्य चर्चित गीतहरु पनि यस अघि सार्वजनिक भईसकेको छ । अब आउने यो गीतले पनि चर्चा कमाउने गीतकार कडरियाले दाबी गरेका छन् । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई प्रविण बेड्वालको कुन गीत धेरै मनपर्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
पैसा आजको समयमा सबैलाई आवश्यक छ । पैसा भए सबथोक छ भन्ने सोचाईबाट मानिसहरु ग्रसित छन् । पैसा सबथोक त होईन तर जीवनयापनका लागि पैसा जरुरी कुरा चाहिँ अवश्य हो । हाल विश्वमा सबै मानिसहरुले पैसा कमाउनका लागि विभिन्न तरिकाहरु अपनाएका छन् । पैसा कमाउने सजिलो उपायहरु मध्ये अनलाईनबाट घरमै बसेर पैसा कमाउने विषय हरेक मानिसहरुका लागि सजिलो तरिका हुनसक्छ । तर यसमा धैर्यता भने चाहिन्छ ।
अनलाईनमा पैसा कमाउन पाईन्छ भनेर विज्ञापन गर्ने विभिन्न फेक तरिकाहरु पनि दिइएका छन् तर आस मात्र देखाउने ती तरिकाहरुमा तपाई नपरेकै जाति । किन कि अनलाईनबाट पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन । जे होस् सामान्य जीवनयापनका लागि भने हामीले अनलाईनबाट समेत पैसा कमाउन सक्छौँ । यो भिडियोमा हामीले पैसा कमाउने सही तरिकाहरुका बारेमा बताएका छौँ जसबाट साँच्चै पैसा कमाउन सकिन्छ र यो कानुनी रुपमा पनि बर्जित छैन । कसरी कमाउने त अनलाईनबाट पैसा ? यो जान्नका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ।